ဖြိုး အလ်ဝိုင်: ဖန်ဆင်းရှင်အယူအဆနှင့် သဘာဝအယူအဆ
ဒီခေါင်းစဉ်ကို တပ်ပြီးရေးဖို့ဖြစ်လာရတာကတော့ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်လောက်ထဲက ဖြစ်မယ်…. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စာရေးသူလည်း အယူအဆနှစ်ခုကို အရမ်းစိတ်ဝင်းစားနေလို့ပဲ…. ဒါနဲ့ စာရေးသူခေါင်းထဲကို လူအများနားလည်နိုင်စေရန် ဥပမာပေးဖို့ စဉ်းစားမိလာတယ်….အခုပြောမှာက သူ့ရဲ့နည်းလမ်း(အယူအဆ) ညီတာနဲ့ သူမညီတာကို ဥပမာပေးပြီး ပြောမပါ……ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဖန်ဆင်းရှင်အယူအဆက သူ့အယူအဆနဲ့သူ ညီတယ်…. သဘာဝအယူအဆဆိုထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့ သူ့အယူအဆနဲ့ သူမညီဘူး…
စာရေးသူစဉ်းစားမိတာကတော့ ဥပမာနှစ်ခုက ဒီလိုဗျာ… (ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆ-
အိမ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးသည် နေစရာထိုင်စရာမရှိသော လူလေးဦးကို တင်ထားမည်…. အိမ်ပိုင်ရှင်သည် စည်းကမ်းထုတ်မည်..သူ့ရဲ့စည်းကမ်းတွေကတော့ သူ့စကားကို နားထောင်ရမည်… တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရန်မဖြစ်ဘူး…. အိမ်ကို သန့်ရှင်းစွာ ထားရမည်…..သူ့၏ စကားကို မဆန့်ကျင့်ရဘူး...ဤဥပဒေကို မလိုက်နာပါက အိမ်ကနေလည်း မောင်းထုတ်မယ်…..ပြီးရင် ရွှံ့ ကန်ထဲကို ငါကန်ချမယ် … ငါ့စကားကို နားထောင်ရင်တော့ ဒီအိမ်ထက်ပို၍ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်မှာ နေထိုင်ခွင့်ပြုမည်...
နောက်တစ်ခုက ဒီလိုဗျာ (သဘာဝအယူအဆ-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)
ဇရပ်တစ်ဆောင်ရှိမည်….လူလေးဦးနေမည်….ဒီကြားထဲက လူတစ်ဦးက စစည်းကမ်းချက်ထုတ်မည်…မင်းတို့ကောင်တွေ ရန်ဖြစ်ရင် ငါမောင်းထုတ်မယ်နော်…ရန်မဖြစ်ကြနွှဲ မင်းတို့ကောင်တွေ ငါ့စကားကို နားထောင်ရမယ် ငါနေသလို့ လိုက်နေရမယ်…ငါက ဆူညံပူညံအသံတွေ နားမထောင်ချင်ဘူးကွ…ငါ့စကားကိုနားမထောင်ရင် ငါမောင်းထုတ်မယ် ပြီးရင်မြောင်းထဲကို ကန်ချမယ်လို့ ပြောမည်… ဇရပ်ဆိုတာ အများပိုင်ဖြစ်သည်….အများပိုင်တဲ့ ဇရပ်ဆောင်မှာ လူအများလာတည်းကြားတာ ဒီလိုလာတည်းကြတဲ့ သူအချင်းချင်းကို စစည်းကမ်းချက်ထုတ်၊ မိုက်ကြေးခွဲသည့်ကောင်က ဘာကောင်ဖြစ်သွားမလဲ…
ငါ့နေထိုင်သလို နေထိုင်မယ်ဆိုရင် အိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးမှာ နေထိုင်ခွင့်ရမည်...(ကြည့် ဒီကောင်က ဘာကောင်ဖြစ်သွားနိုင်သလဲ ကိုယ့်ကိုတိုင်တောင် အိမ်တစ်လုံးမှ မရှိလို့ ဇရပ်ဆောင်မှာ အများနည်းတူနေထိုင်နေရတာလေ...ဟိုရောက်မယ် ဒီရောက်မယ်ပြောရအောင် ဒီနတ်ပြည်ကို သူ့အမေလင် သူ့ပထွေးက ဆောက်လုပ်ထားလို့လား... ဒါ့ကြောင့်ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော) ပြောပြောနေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နတ်ပြည်၊ငရဲပြည်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းသက်သက်သာ ဖြစ်သည့်ဆိုသော အဆိုက မမှားပါဘူး.....
အပေါ်က ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆဆိုရင်တော့ သူတို့စကားနဲ့ သူတို့ ညီတယ်… ဒီကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းထားတယ် သို့ပါသော်ကြောင့် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ပမာမခန့်ပြုတဲ့သူကို ဖန်ဆင်းရှင်က ဖျက်ဆီးမယ်လို့ ပြောတာ မှားလား…..သူတို့အယူအဆအတိုင်းဆို သူတို့ဖြဲခြောက်တာ မဟုတ်တော့ဘူး
ဟော့ သဘာဝအယူအဆလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာများကတော့ ငရဲပြည်တွေကော နတ်ပြည်တွေကော သူ့အတိုင်းကျင့်ရမယ် သူ့လိုမကျင့်ရင် နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်ဘာသာက ဖြဲချောက်တာလဲ….ဖန်ဆင်းရှင် အယူအဆက သူ့စကားအစနဲ့ အဆုံးက ညီတယ်…အစကတော့ သဘာဝ အဆုံးကြတော့သူ့စကားကို နားမထောင်ရင် ငရဲကျမယ် သံဿရာအဆက်အဆက်က မလွှတ်နိုင်ဘူး သူ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဒီ့ကောင်ကို ဘာကောင်လို့ ပြောရမလဲ…လူပါးဝတာလား ခွေးပါးဝတာလား….ဘာပါးဝတာလဲဗျာ…..ကဲ စာရေးသူမေးတော့မယ.်…
ဂေါတာမက သဘာဝကို သူမဖန်ဆင်းဘူးလို့ ပြောသောလည်း သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဖန်ဆင်းရှင်လို့ ဆိုလိုလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ…ဘာကြောင့်လဲ ကြည့်လေငရဲ တို့၊ နတ်ပြည်တို၊့ အပြစ်လုပ်ရင်ခံရမယ်တို့ ရဟန်းအနာကျတွေကို ပြစ်မှားရင် နောက်ဘဝမှာ ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းချောက်တယ်….စာရေးသူဘာပြောချင်လဲဆိုတာ နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်တယ်….
သို့ပါသော်ကြောင့် ဤသို့သော ဖန်ဆင်းရှင်အယူဝါဒသည် သူ့ဥပဒေအတိုင်းဆို သူမှန်တယ်….နောက်ထပ်မေးချင်သေးတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုပေါ့နော်….ဘယ့်သူက နတ်မင်းရာထူးတို့ သိကြားမင်းရာထူးတို့ ဿသနာ့စောင့်နတ်ရာထူးတို့ကို ခန့်ပေးထားတာလဲ…..သဘာဝကြီးက Auto အော်တို သူ့အလိုလို မင်းက နတ်မင်းလုပ် ဟိုပုကွကွနဲ့ကောင်က သိကြားမင်းလုပ်ဆိုပြီး အော်တို ဖြစ်လာတာလား စောက်ခွက်ချွန်ချွန်က ဿသနာ့စောင့်နတ်လုပ် ဆိုပြီး သဘာဝက အော်တိုဖြစ်ခိုင်းလိုက်တာလားဗျ??????… မသိလို့မေးတာနော်…ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ…..
ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ် ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်တော့ ကောင်းအောင်ကျင့်ဖို့ လိုအုံးမလား ????
ဟာ ကိုယ်တော်ချော သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီး ကောင်းအောင်ကျင့်ဖို့ လိုအုံးမလားလို့ မင်းက ပြောတယ် … ဒါဆိုလူတွေက ဆိုးကုန်တော့မပေါ့ လုပ်ချင်းတာတွေ လျှောက်လုပ်ကုန်တော့မပေါ့လို့ ဖေမှန်းမသိ မေမှန်းမသိတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ၇ိုင်းကုန်တော့မပေါ့လို့ စာရေးသူကို မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်….
ဒီလိုပြောလာရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားက ဘာသာတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲ မဆိုးအောင် မမိုက်အောင် ဖြဲခြောက်ထားတဲ့ ဥပဒေပြဒါန်းချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်နေလိမ့်ပါ့မယ်….ပြောရရင် ဝတ္တူစာအုပ်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်…တကယ်လက်တွေ့ကျသော ဘာသာတရားစာအုပ်မဟုတ်ဘဲ မဆိုးအောင် မမိုက်အောင် ချောမော့လိမ်လည်ထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်လို့ပဲ စာရေးသူ ဆိုချင်ပါတယ်…
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် တကယ်မဟုတ်ဘဲ ဖြဲခြောက်ထားနဲ့ မတူဘူးလားဗျာ…..
သဘာဝက ဒါတွေနားလည်ပါမလား???….ဒီကောင်ကဆိုးလို့ သွားငရဲပြည် ဒီကောင်က တော်လို့ သူတောင်ကောင်းဖြစ်လို့ သွား နတ်ပြည်ဆိုတော့ ဒါက ခင်ဗျာတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ သဘာဝကြီးက ခင်ဗျာတို့ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးရမလား …သဘာဝတရားဆီမှာ လူတွေရဲ့ တနေ့စာတနေ့စာ မှတ်တမ်းစာအုပ်ရှိလို့လားဗျာ…. တကယ်တော့ ဂေါတာမက သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို သဘာဝပါဆိုပြီး လျှောက်ပြောနေတာနဲ့ မတူဘူးလား…..သို့ပါသော်ကြောင့် သဘာဝလို့ ယူဆရင် ဘာသာမဲ့တို့ယူဆကြသော သဘောသဘာဝအတိုင်း ဤသို့ပင် ယူဆကြပါ….
သဘာဝအယူအဆ (သိပ္ပံသမားအချို့ နဲ့ ၊ ဘာသာမဲ့အယူအဆ)
သဘာဝလို့ သတ်မှတ်ရင် ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိဖို့လိုအုံးမလဲ အချိန်တန်မွေးပြီး အချိန်တန်သေရမှာ ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို မျှော်ရည်မှန်းဆ နေကြတာလဲ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ လက်ခံရင် နိဗ္ဗာန်မလို ငရဲမရှိ မွေးပြီးရင် သေရမယ် ဒါပဲ ဒါမှသာလျှင် သဘာဝက ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ် အကုန်ဖြစ်လာတာကြတော့ သဘာဝ သေခါနီးမှ နိဗ္ဗာန်၊ငရဲ ဆိုတာ လိုအုံးမလား????
ဒါပေမဲ့ စာရေးသူကတော့ လိုလိုမယ်မယ် ဖန်ဆင်းရှင်အယူအဆကို ယူထားပါတယ်….စာရေးသူသေလို့ ကမ္ဘာကြီးက သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ သိခဲ့ရရင် စာရေးသူ အရှုံးမရှိဘူး…သြော်လူသားတွေ အားလုံးလည်း သူ့လိုကိုယ့်လို သဘာဝကြောင့် မွေးလိုက်သေလိုက်ကြပါလားဆိုပြီး ဖြေသိမ့်နိုင်တယ်…ဟုတ်တယ်လေ လူသားအားလုံးဟာ သဘာဝကြောင့် သေတာလေ…စာရေးသူတစ်ယောက်တည်း ကွက်ပြီး သေတာမှ မဟုတ်တာ……တကယ့်လို့သာ ဤကမ္ဘာကြီးက ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့် ဖြစ်လာတယ်လို့ မှန်နေရင် စာရေးသူ သေပြီးမှ သိခဲ့ရရင် နားကားသွားနိူင်ပါတယ်…